Plasma 5.22 beta inoti kuonekana neKSysGuard uye inounza shanduko | Linux Vakapindwa muropa
KDE yanga ichitibvumidza kushandisa yayo nyowani System Monitor application kwenguva yakareba. Iyo ine yakapusa interface, asi haina kupa mashoma mashandiro eizvozvo. Pari zvino yatovepo mune yakagadzika vhezheni yePlasma, asi zvakadaro zvinoenderana neKSysGuard, software yavakange vakavakirwa. Izvo zvakatanga kuve chikamu chekare, nekuti iri China vakaparura Plasma 5.22 Beta uye imwe yeshanduko yavanotaura ndeyekuti System Monitor inotsiva KSysGuard.
Sezvo mukati zvaburitswa zvakapfuura, KDE inoda kujekesa kuti Plasma 5.22 Beta isati yaibva kuti ishandiswe mumidziyo mikuru kana yekugadzira. Chinangwa ndechekuti vashandisi uye vanogadzira vayedze iyo inotevera graphical nharaunda uye vanobatsira kuipukuta, uye mune vevanogadzira vanofanirwa zvakare kugadzirisa yavo software kuti irege kuunza matambudziko kana yakagadzikana vhezheni yasvika. Rondedzero izere yeshanduko yePlasma 5.21.90 iri mu Iyi link, uye hapana munhu anoshamisika nenhamba yacho nekuti ndizvo zvavanoshandisa pamibheda.
1 Pfungwa dzePlasma 5.22 Beta
2 Maitiro ekuisa izvi uye mamwe maPlasma betas
Pfungwa dzePlasma 5.22 Beta
In the kusunungura chinyorwa kubva kuPlasma 5.22 Beta taura shanduko idzi:
System Monitor inotsiva KSysguard seyakagadziriswa system yekutarisa application.
Iyo nyowani inogadziridza pani yekujekesa chimiro inoita kuti iwo mapaneru uye mapaneru majeti awedzere kujekesa, asi zvinodzima pachena pachena zvachose kana chero windows akawedzerwa. Iwe unogona zvakare kuita kuti panhivi igare yakajeka kana kugara iine opaque.
Iyo Kickoff nyowani haisisiri kutambura nekunonoka usati wachinja zvikamu kana netsaona kuchinja zvikamu kana uchifambisa iyo kokorara.
Tsigiro yezviitiko muWayland.
Iyo Global Menyu applet ikozvino inokutendera iwe kutsvaga kuburikidza nemenu yezvinhu muWayland.
Task Manager's "Enzanisa Windows" ficha izvozvi zvinongoratidzira windows kana uchinge uchikwira pamusoro peiyo tembiricha yewindo mune chishandiso, uye maitiro aya anogoneswa nekutadza.
Mapfupi epasi pese anosanganisira asiri emaLatin zviratidzo pane asiri maUS kiyibho zvino anoshanda nemazvo.
Kutsigira kweWayland kazhinji kwakagadziridzwa zvakanyanya.
Iye zvino unogona kushandura saizi yemavara mune anonamira mavara mawadhi.
Iyo app iko zvino yovhura kune iyo nyowani "Yekukurumidza Zvirongwa" peji iyo inoratidza mamwe eanonyanya kushandurwa marongero, uye inopa chinongedzo kune iyo iyo Wallpaper inogona kuchinjwa.
Iye zvino unogona kudzima zvekushandurwa kwepamhepo kana iwe uri kushandisa distro iyo yasarudza kuvabvumira nekutadza, kana kuvabvumira kana uri kushandisa distro iyo isina.
Yakagadziriswa khibhodi yekuwanika uye kufamba.
System Tray maapplet mune akawandisa akaenzana zvakanyanya pakuonekwa uye nekushandisa.
Iyo Dhijitari Clock pop-up hwindo rakagadziriswazve kugadzirisa aesthetics uye usability.
Iye zvino unogona kumanikidza iyo Dhijitari Clock applet kuratidza iyo zuva pamutsetse mumwe chete senguva, kunyangwe pane akakwirira mapaneru.
Kugona kusarudza chimiro chemidziyo yemadhirowa edhiyo zvakananga kubva kune odhiyo vhoriyamu systray applet.
Clipboard nhoroondo inogona kudaidzwa kumusoro chero nguva nekudzvanya Meta + V.
Zviziviso zvefaira (semuenzaniso mafaira akarodha pasi, akatamiswa, nezvimwewo) izvozvi ratidza mashandiro anozovhura iyo faira kana chiito che "Vhura" chikaitwa.
Dhawunirodha zviziviso izvozvi zvinokuzivisa iwe kana zvavharirwa nekuti unofanirwa kutaurira bhurawuza kuti itange / pfuurira kurodha pasi.
Iyo ziviso sisitimu ikozvino inogonesa kuita "Usakanganise" maitiro nekumisikidza panguva yekugovana screen kana screencasting.
Iwe unogona ikozvino kuratidza mitsara-mitsara zvinyorwa zvekutsvaga, izvo zvinoita kuti dudziro yeduramazwi (semuenzaniso, nyora "tsanangura chikafu") zvinobatsira.
Izvo hazvichadzore zvakapetwa zvabuda kubva kwakasiyana maruncher (semuenzaniso, kutsvaga "firefox" haichapi mukana wekutanga application, pamwe nekumhanyisa firefox binary kubva kumutsara wekuraira).
KWin / mifananidzo:
Tsigiro yekutarisisa yakatarwa yakazara yakazara windows windows inomhanya pane isiri-NVIDIA GPUs muWayland, iyo inovandudza mashandiro.
KWin ikozvino inotsigira kusiyanisa zororo rate / MaharaSync anoratidza muWayland.
KWin ikozvino inotsigira kupisa plugging kweGPUs muWayland.
Tsigiro yekumisikidzwa kwemasccan kukosha kwezvikwiriso muWayland.
Vertical uye yakatwasuka yekuwedzera ikozvino inoshanda muWayland.
Iyo "Present Windows" mhedzisiro inogoneswa zvizere muWayland mune ese mamiriro.
Mumagadzirirwo emultisikopu, windows nyowani zvino dzinovhurika pachiratidziro panotukwa mbeva nekukanganisa.
Maitiro ekuisa izvi uye mamwe maPlasma betas
KDE Nharaunda inoyambira kuti ndeye beta uye inogona kuunza matambudziko, asi kana iwe uchida kuiisa izvozvi, unofanirwa kuita zvinotevera.
Isu tinonyora izvi mune terminal:
Tinotangazve komputa. Kana isu tisingakwanise, tinonyora zvinotevera mune terminal:
IMPORTANT: Kana paine matambudziko, repository inofanirwa kubviswa (ine ppa-purge) ku shandura shanduko uye kudzikisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Plasma 5.22 beta, ikozvino yavapo, inoti kuonekana neKSysGuard uye inounza kugadzikana uye shanduko shanduko